Habka ugu raqiisan ee loogu dhaqaaqo dalka oo dhan 2021 - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn Habka ugu raqiisan ee loogu dhaqaaqo dalka oo dhan 2021
Dadku waxay leeyihiin sababo kala duwan oo ku saabsan sababta ay ugu gudbayaan dalka oo dhan ama ay meel uga guuraan taas oo noqon karta raadinta daaq cagaaran, fursado fiican iyo wixii la mid ah. Sida aan wada ognahay in ka guuritaanka guri guri ilaa guri kale iyada oo aan loo eegin sida masaafadu u dhowdahay hawsha walaaca badan waxay ka badan tahay u guurista waddanka oo dhan, laga bilaabo xirxirida iyo feerka ilaa gaadiidka ilaa nadiifinta iyo furfuridda, waxay u muuqataa welwel durba iyo walwal ku saabsan sida loo guuro iyo habka ugu raqiisan ee loogu gudbo dalka gudihiisa waa in aan lagu darin welwelkaas waana sababta aan waqti u qaatay si aan u maro culeyska ah in aan soo uruuriyo dhammaan macluumaadka suurtagalka ah ee aad u baahan doonto haddii aad rabto in aad u gudubto dalka oo dhan oo raqiis ah .
Markaa haddii aad qorshaynayso inaad u gudubto dalka oo dhan, adoo ka fikiraya sidii aad ugu bixi lahayd kharashka iyo sidaad u maarayn karto adiga oo aan bangigaaga jabin markaa hubaal waxaad ku jirtaa bogga saxda ah maadaama aan ku siin doono habka ugu raqiisan ee aad ku guurto dalka gudihiisa.
MAXAY KA DHIGAN TAHAY IN LOO GUURIYO DALKA SOCODKA?
U guuritaanka waddanka gudihiisa waxaa loola jeedaa in qofku ka safrayo dhinac ka mid ah dalka una socdo dhinac kale (badiyaa masaafo dheer) ama shaqo cusub, ama bilow cusub.
MIYAY KU ADAG TAHAY IN LA SOO RARO DALKA SALOOSHA?
Qofna uma baahna faaliye si uu ugu sheego guuristu inay tahay hawl daalin ah oo markaad u kala guureyso dalka oo dhan waxay noqon kartaa mid dhib badan, runtii waxay noqon kartaa mid walaac badan. Ka sokow culeyska ka imanaya guuritaanka, ku biiridda jawiga iyo dhaqanka cusub, hab nololeed cusub, isbeddelka cimilada iyo hab -nololeedka, raadinta dariiqaaga, sameynta saaxiibo cusub, kuwaas oo dhammaantood u baahan waqti iyo dadaal. Laakiin haddii aad is -dejin karto oo aad mari karto geeddi -socodka isbeddelka markaa u -guuridda waddanka oo dhan ma aha inay kugu adkaato.
SIDA LOO GUURIYO DALKA SOCODKA
Sababo kasta oo aad go'aansatay inaad guurto dhib kuma aha. Hawsha dhabta ah ayaa dhab ahaantii u diyaargaroobeysa guuritaanka, maadaama dad badani aysan garanayn waxay sameeyaan oo ay ku dambeeyaan baroorta guuritaanka iyo dhibka ay kala kulmeen intii ay guurayeen. Si loo helo dhaqdhaqaaq habsami leh oo lagu go'aaminayo hababka gaadiidka ee adiga iyo alaabta gurigaagu waa muhiim, sidaas oo kale ayaa cilmi -baaris loo sameynayaa gaar ahaan marka aadan qorsheyneynin inaad alaabtaada dhaqaajiso maxaa yeelay ma rabto inaad ku dhacdo khalad gacmaha. Waxaad waddaa kharashyo badan oo hore loo khiyaameeyay waligeed ma ahayn hab lagu badbaadin karo kharashkaaga. Si fudud u soco, xirxirida alaabta aan faa'idada lahayn waa wax aan loo baahnayn, sii ama tuur iibinta deyrka oo hayso waxyaabaha aad weli u baahan tahay, si fiican u xir oo calaamadee sanduuqyada, maxaa yeelay ma doonaysid in alaab jilicsan oo si taxaddar leh loo maareeyo oo hubi dhammaan qalabka guriga si habboon cayayaanka. Tan waxaad ku arki doontaa inaad u dhaqaaqdo walaac yar.
WAA MAXAY HABKA UGU WANAAGSAN EE LOOGA RARO DALKA SALAASHA?
Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee looga gudbi karo waddanka waa iyada oo la adeegsanayo adeegga shirkad guuritaan oo la isku hallayn karo. La -xiriirinta dhaqaajiyayaashu waa inay tahay wax aadan iska indha tirin, ka hubso tiro shirkado guuritaan ah si aad u hesho xigashooyin guuritaan ah, samee cilmi baaris oo hubi faallooyinkooda si aad u hubiso inay bixiyaan adeegyo aad u wanaagsan iyo nooca adeegga ay bixiyaan maadaama dhammaantood ay is muujiyeen sida wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, waxay la timaadaa kharashyo badan iyo kuwa raadinaya habka ugu raqiisan si aad ugu guurto waddanka gudihiisa, samaynta guuritaankaaga ayaa aad uga yar haddii aad waqti haysato.
Immisa ayuu qarashka dhaqaaluhu qaadaa?
Ka fekerida qiimaha u -guuritaanka waddanka gudihiisa waa mid aad looga fikiro laakiin tan kaliya waxay ku xiran tahay inta aad u guureyso, meesha aad u guureyso (xagga masaafada), iyo sida aad rabto inaad u guurto. Haddii aad qorshaynayso inaad kiraysato baabuur ama isjiidka, qiimuhu wuu ku kala duwanaan doonaa adiga oo doonaya inaad adeegsato adeegga shirkad dhaqaajisa oo xirfad leh. Kharashku wuxuu kaloo ku xirnaan doonaa cabbirka gurigaaga; ma laba qol jiif ama sedex qol jiif ah ama istuudiyaha, inta rarkaagu culus yahay iwm. Laakiin celceliska kharashka guuritaanka qolkiiba wuxuu ku kacayaa qiyaastii $ 1000 - $ 1500 oo leh adeeg buuxa halka celceliska kharashka ku -wareegga dalka oo dhan ku saleysan miisaanka celceliska shixnadda. Tusaale ahaan, qiimaha celceliska guuritaanka shixnad dhan 7500 rodol iyo masaafo dhan 1000 mayl, wuxuu ka bilaabmaa $ 5000 oo kor u kaca iyadoo ku xiran shirkadda.
INTAA LACAG AAD KAYDIN ​​KARTO KA HOR INAAD DALKA SOCODKA U GUURIN?
Inta aad rabto inaad keydiso ka hor intaadan u gudbin waddanka oo dhan waxay ku xiran tahay sida aad u qorsheyneyso guuritaanka. Ka dib markaad go'aansato sida loo guuro, wax loo waydiiyo, loo wada xaajoodo maadaama aad raadinayso habka ugu jaban ee aad ugu guuri karto waddanka gudihiisa, waa inaad sidoo kale samaysaa isbarbardhigyo ka hor intaadan dooran dalabka adiga kugu habboon. Tusaale ahaan markaad rabto inaad ka gudubto waddanka oo aad ka gudubto kuwa shirkado wada, la xiriir shirkado badan intii suurtagal ah, codso xigashooyin ama qiyaas, weydii su'aalaha adeegyada ay bixiyaan oo dooro midka leh dalabka ugu fiican. Xusuusnow, haddii aad qorsheyneyso inaad alaabtaada ku rarto dhaqaaleeye shirkad, waxay u dhexayn kartaa $ 1000 illaa $ 20000 iyadoo ku xiran masaafada iyo culeyska shixnadda.
GUURINTA SHIRKADAHA DALKA
Miyaad ka fikiraysaa inaad u guurto waddanka oo dhan adoo adeegsanaya shirkad guuritaan ah? Warka fiicani wuxuu yahay inaan diyaariyey liis shirkado guuritaan ah oo aad ka hubin karto Waddanka Mareykanka laakiin si fiican u samee inaad sameyso baaritaan dheeri ah si aad u hubiso inay yihiin waxa aad u baahan tahay. Hoos waxaa ku qoran liiska shan (5) kuwa ugu sarreeya dal -gudbayaasha:
Iyagu waa mid ka mid ah shirkadaha guur -guura ee ugu waaweyn gobolka mideysan oo leh macaamiil aad u fiican iyo adeeg gaarsiin. Waxa kale oo ay ku siiyaan kormeer guriga oo dhammaystiran iyo adeegyo kaydinta oo sugan. Waxaad booqan kartaa degelkooda si aad u hesho xigashooyin iyo macluumaad kale oo laga yaabo inaad u baahato.
Waxaa loo yaqaanaa inay yihiin kuwa ugu raqiisan kuwa dhaqaajiya dalka gudihiisa waxaana lagu tilmaamaa halyeeyga runta ah ee warshadaha guuritaanka oo leh 100 sano oo adeeg macmiil oo aad u wanaagsan, iyo wakiilo xirfadlayaal ah oo ku baahsan waddanka oo dhan. Booqo degelkooda wixii macluumaad dheeraad ah.
Gaadiidka Mayflower Waxaa loo yaqaanaa ruug -caddaa marka ay timaaddo in lagu dhaqaaqo diiwaanka raad -raac aad u fiican. Iyaguna waa kuwo aad loogu kalsoon yahay. Way fiicantahay inaad booqato degelkooda wixii macluumaad dheeraad ah.
Haddii aad raadinayso dhaqaaleeyaha barkadda khiyaanada, U-Pack ayaa laga yaabaa inay adiga kugu habboon tahay. Iyaga oo leh shabakaddooda hodanka ah iyo adeegga macaamiisha ee aadka u wanaagsan. In kasta oo ay tahay shirkad adigu samayso, haddana waxay leeyihiin adeeg gaarsiin oo aad u fiican.
Waqooyiga Ameerika Van Lines
Khadka tareenka ee Waqooyiga Ameerika wuxuu bixiyaa adeeg gudaha iyo dibaddaba Mareykanka. Waxaa la og yahay inay leeyihiin adeegyo lagu daro oo kala duwan, mareeg saaxiibtinimo leh, adeegyo kaydin oo wanaagsan dhammaan baahiyaha iwm. Way fiicantahay inaad booqato degelkooda wixii macluumaad dheeraad ah.
17 HABAB OO UGU DHAQANSAN SI LOO GUURIYO DALKA SOCODKA.
Ma aha wax war ah in dhaqaajinta masaafo dheer ay aad qaali u tahay oo isku dayga in la dhimo qarashka runtii maahan wax xun maxaa yeelay qofna ma aha mashiinka lacagta sameeya guriga. Nasiib wanaag adiga qiimaha guuritaanku kuma xirna oo kaliya masaafada iyo wd waxay eegi doontaa siyaabo suurtogal ah si aad u yareyso qiimaha guuritaanka. Halkaan waxaa ah liiska toddoba iyo toban (17) habka ugu jaban ee looga gudbo waddanka gudihiisa.
Guuritaanka naftaadu waa hal dariiqo oo lagu dhimi karo qarashka waxaadna ku tiirsanaan kartaa saaxiibbo si ay kaaga caawiyaan dhaqaajinta alaabta qaarkood, in kasta oo ay tahay in qofku taxaddar yeesho gaar ahaan haddii aad haysato alaab guri ama agab guri oo jilicsan.
U soo guurista khafiif ah
Fududee culayskaaga adigoo iibinaya dayrka ama sii daa waxyaalo aad ogtahay inaadan mar dambe u baahan doonin ayaa kaa caawin doona inaad yarayso guuritaankaaga.
Samaynta aad guuro xilliyeed
Ku -guuridda waqti yar oo tartan ah waa mid ka mid ah hababka ugu raqiisan ee lagu dhaqaaqo waddanka gudihiisa maadaama ay gacan ka geysaneyso yareynta qarashka, maadaama kirooyinka ay u eg yihiin inay dhacayaan dhammaadka bisha, shirkadaha guurguura waxay yeelan doonaan ballansasho badan waqtigaas. Sidaa darteed u guuritaanka waqti kale waxay noqon doontaa caawimaad. Xagaagu sidoo kale waa wakhti qaali ah oo lagu guuro sababtoo ah qoysasku waxay dejin doonaan ka hor inta aan dib loo bilaabin dugsiga sannadka cusub.
Adigoo ku guuleystay inaad yareyso culeyskaaga. Waxaad u soo rari kartaa waxyaabaha muhiimka ah ee aad u baahan tahay gurigaaga cusub adigoo adeegsanaya UPS, adeegga boostada Mareykanka, ama FedEx.
Jarida hoos u dhaca kharashyada
Waqtigan xaadirka ah ma doonaysid in aan kharash aan loo baahnayn ku bixiyo, helitaan kaliya ayaa loo baahan yahay oo raadinta ikhtiyaarro kale ayaa ah waxa ay tahay inaad ka taxaddarto. Tusaale ahaan, halkii aad ka iibsan lahayd sanduuqyada aad xirxirto, waxaad booqan kartaa dukaamada raashinka si aad u codsato sanduuqyada ay rabaan inay dib u warshadeeyaan.
Ijaar caag dhaqaaqaya
Kharashka ku -wareejinta caadadu inta badan waa mid hooseeya, markaa adiga ayaa adigu samayn kara raridda oo u rarra gurigaaga cusub.
Isticmaalka taayirrada xamuulka waxay la mid tahay cawska guurguura, laakiin adiga ayaa maarayn doona rarka iyo furitaanka naftaada waxaadna yeelan doontaa shirkad xamuul oo kaa caawisa gaadiidka.
Xaaladdan waxaad fursad u leedahay inaad doorato qaybta hawsha guuritaanka ee aad qaban doonto. Haddii ay tahay xirxirida iyo furfuridda ama kaxaynta baabuurka xamuulka ah ee adiga laftaadu, waxay kaa caawin doontaa inaad lacag badan ku badbaadiso foosha. Ogsoonow in raridda rarku ay qaadato waqtiga ugu badan iyo si kale haddii loo dhigo xisaabinta inta badan khidmadda guuritaanka, markaa waxaa laga yaabaa inaad doonaysid inaad tixgelisid kaxaynta baabuurka.
Shirkaddaadu ha bixiso kharashka guuritaankaaga
Runtii tani waa kaalmo, gaar ahaan haddii aad hadda heshay shaqo cusub, shirkadaha badankood waxay bixin karaan kala bar ama dhammaan qiimaha guuritaanka. Way fiicantahay inaad weydiiso su'aalo ku saabsan siyaasadaha guuritaanka ama guuritaanka shirkadda, waxaa laga yaabaa inay lahaadaan dhaqaajiyayaashooda waddanka gudihiisa.
Kiro foosha dhaqaaqa
Shaqaalaynta shaqaalaynta ayaa kaa caawin doonta inaad iska yarayso kharashka halkii aad ka bixin lahayd kumanaan adeeg -bixiye buuxa, waxaad go'aansan kartaa qaybta hawsha aad caawimada uga baahan tahay oo aad ku bixin karto intaas uun.
Weydiinta saaxiibbadaada iyo qoyskaaga waa hab kale oo lagu dhimi karo qarashka in kastoo, waxay la macno tahay inaad raacdo jadwalkooda maadaama ay kaliya ku caawin karaan waqtiga firaaqadooda. Dhamaadka mahadnaqa hadiyadaha ma aha fikrad xun.
Ku deeq badan items
Ma doonaysid in shixnaddaadu aad u culus tahay, sii waxyaabaha aanad u baahnayn, waxay kaa caawin doontaa inaad yarayso kharashka.
TALOOYIN KU SAABSAN DALKA SOCODKA
U guuridda waddanka oo dhan waxay u baahan tahay qorsheyn iyo abaabul dhab ah iyo ogaanshaha waxa la samaynayo ka hor intaadan guurin aad bay muhiim u tahay si loo badbaadiyo waqtiga oo looga hortago walaaca aan loo baahnayn waa muhiim. Halkaan waxaa ah lix (6) talooyin oo loogu talagalay u -guuridda waddanka oo dhan:
Go'aanso inaad guurto alaabta gurigaaga. Miyaad weli rabtaa alaabtii hore? Markaa waa inaad tixgelisaa qiimaha gaadiidkooda iyo haddii aad rabto inaad iska iibiso oo aad kuwa cusub ka hesho goobtaada cusub, waa wax ay tahay inaad tixgeliso.
Wadista ama Duulista. Marka laga reebo culeyska xirxirida, qaabkaaga gaadiidka waa in sidoo kale la tixgeliyaa. Haddii aad doorbideyso Duulimaadka markaa waa inaad ka fekertaa dhoofinta gaarigaaga sidoo kale iyo wadista, ma haysataa waqti kugu filan oo aad ku waddo masaafada dheer.
Guri kiro ah. Ka fikir inaad kireysato guri marka hore ka hor intaadan gadan. Goobaha cusubi waxay la imaan karaan waxyaabo la yaab leh oo kala duwan runtiina waxaad u baahan doontaa inaad si habboon u degto ka hor intaadan guri meel cusub ka helin.
Calaamadeynta sanduuqyadaada. Haddii aad qorshaynayso inaad alaabta gurigaaga u rarto shirkad guurtay, calaamadeynta sanduuqyadaadu waa hal dariiqo oo lagu ilaaliyo alaabtaada si looga fogaado isku -darka.
Samaynta qorshooyinka. qorshee sidaad ugu noolaan lahayd gurigaaga cusub kahor imaanshaha alaabta gurigaaga iyo alaabta kale ee guriga waa lama huraan maadaama aadan rabin inaad ka iibsato wax kasta oo yar oo aad uga baahan doonto alaabta maxalliga ah. Maareynta kharashaadka waa furaha, sidaa darteed waxyaabaha sida dharka, cuntada iyo waxyaabaha kale ee daruuriga ah ee laga yaabo inaad u baahato kahor imaanshaha sanduuqyadaada.
Samaynta cilmi -baarista. Haddii aad la guureyso qoyskaaga, markaa waa inaad tixgelisaa waxyaabaha sida dugsiyada, isbitaallada iyo wixii la mid ah.
Halkaas ayaad ku haysataa, waxaad u baahan tahay oo dhan inaad ka ogaato siyaabaha ugu jaban ee aad ugu guurto waddanka oo dhan laakiin ogow habka ugu raqiisan ee lagu raro mar walba ma aha habka ugu fiican maxaa yeelay waxay la timaadaa walaac badan. Markaa haddii aad qorshaynayso inaad si fiican u dhaqaaqdo shaqaalaynta xirfadleyaal xirfadlayaal ah ayaa kaamil ah oo ugu qaalisan, shaqaalaynta baabuur xamuul ah ama trailer ayaa yaraynaysa culayska oo kharash badan ma leh laakiin weli haddii aadan ka fikirin inaad adigu samayso markaa walwal.
Ma ka raqiisan tahay markabkayga alaabta guriga ama iibso kuwa cusub?
Waxay ku xiran tahay sida aad u jeceshahay alaabtaada oo aad u iibiso si aad u hesho kuwo cusub waxay ku siinaysaa fursad aad wax cusub ku iibsato laakiin ma jirto wax hubin ah inaad ku heli doonto isla qiimihii..sidaa darteed si fiican u xisaabso qiimaha dhoofinta iyo helitaanka kuwa cusub si ay u ogaadaan midka ugu wanaagsan.
Ma u fiican tahay inaad guri ka iibsato goobtayda cusub?
Waxaa laga yaabaa inaad ka fekerto inaad kireysato guri muddo ah intaad isku dayeyso inaad hesho raadkaaga.
Miyaan iibiyaa gurigaygii hore intaanan guurin?
Haddii guuritaankaagu yahay mid joogto ah, iibinta gurigaaga maahan fikrad xun haddii kale kirayntu way ka fiican tahay macnaha inaad leedahay hab aad ku abuuri karto dakhli dadban ilaa intaad rabto.
Maxay yihiin sababaha looga guuro dalka oo dhan?
Dadku waxay leeyihiin sababo kala duwan sababta ay u rabaan inay u guuraan, qaar ka mid ah kuwa caanka ah waxaa ka mid ah; markay shaqo cusub ka soo degayaan, waa hawlgab, waxay raadinayaan daaq cagaaran ama waxay go'aansadeen inay yeeshaan isbeddel deegaan
Dhaqdhaqaaqayaasha shirkadu ma bixin doonaan wixii magdhaw ah?
Dabcan, si fiican u samee inaad baarto alaabtaada inta aad xirxirneyso iyo santuuqyada sidoo kale, si ay u ogaadaan waxa ay la tacaalayaan.
Siyaabaha ugu raqiisan ee sanduuqyada loogu raro gobol kale
Lacag Bixiya si aad ugu guurto Dal kale | 15 Meelaha Ugu Fiican
25+ Qaababka ugu raqiisan ee lagu safro 2021 | Socdaal badan & kharash yar
Geoarbitrage: Maxay ka dhigan tahay? Sida Loo Jabsado Goobtaada
Maalgelinta Hantida Ma guurtada ah: 15 Talooyin Ku Saabsan Maalgelinta Hantida Guryaha ee Bilowga ah
Liiska Hubinta Marti -geliyaha Airbnb 2022: Ku hel Khibrada ugu Fiican Airbnb
Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee lagu noqon karo Airbnb Superhost waa in la siiyo martidaada khibrad xiiso leh…
Thanksgiving waa fasax qaran oo sanadle ah gudaha Mareykanka iyo Kanada, halkaas oo loogu dabaaldego barakada iyo…